बलिउड फेरी शोकमा ! घरबाट दुर्गन्ध आउन थालेपछि प्रहरी आएर हेर्दा फेला पर्यो चर्चित कलाकारको शव « Gaunbeshi
बलिउड फेरी शोकमा ! घरबाट दुर्गन्ध आउन थालेपछि प्रहरी आएर हेर्दा फेला पर्यो चर्चित कलाकारको शव
एजेन्सी । भारतीय एक कलाकारको शव उनी वस्ने गरेको भवनमा फेला परेको छ । वेब सिरिज ‘मिर्जापुर’का हरेक पात्रले फ्यानको मनमा विशेष स्थान बनाएका छन् जसमा मुन्ना भैयाको साथी ललितको भूमिका निर्वाह गर्ने ब्रह्मा मिश्रको नाम पनि समावेश छ । पक्कै पनि यो सिरिजमा उनको साइड रोल थियो तर आफ्नो दमदार अभिनयले फ्यानको मनमा गहिरो छाप छोडेर अब फ्यानको मन पर्ने यो स्टारले यस संसारलाई सदाको लागि बिदा गरिसकेका छन् । ब्रह्म मिश्रको ३६ वर्षको उमेरमा हृदयघातका कारण निधन भएको थियो । अभिनेताको निधनको खबरले सबैलाई शोकमा पारेको छ ।
तर, जब ब्रह्मा मिश्रको मृत्युको खबर सार्वजनिक भयो, सबै पा ग ल भए । जानकारीका अनुसार ब्रह्म मिश्रको तीन दिनअघि निधन भएको थियो र उनको शव घरको बाथरुममा रहेको थियो । यति मात्र होइन, उनको शरीरबाट दुर्गन्ध आउन थालेको थियो, वास्तवमा, नोभेम्बर २९ मा ब्रह्माले छाती दुखेको गुनासो गरे, जसका कारण उनी चिकित्सककहाँ गए। यसै क्रममा डाक्टरले अभिनेतालाई ग्याष्टिकको औषधि दिएका थिए, त्यसपछि अभिनेता उनको घरमा आएका थिए । यसपछि उनको हृदयघातका कारण मृत्यु भएको थियो । उनको शव मुम्बईस्थित उनको घरको बाथरुममा तीन दिनसम्म परेको थियो ।
पुलिसका अनुसार ब्रह्म मिश्र विगत चार वर्षदेखि यही घरमा बस्दै आएका छन् । उसलाई भर्सोभा इनलाखास सोसाइटीबाट अनौठो गन्धको गुनासो गर्दै फोन आयो, जस पछि एक टोली अभिनेताको फ्ल्याटमा पुग्यो। घर भित्रबाट ताला लगाइएको थियो। त्यसैले पहिलो प्रमुख निर्माता बोलाइएको थियो। प्रहरी घरभित्र पसेपछि बाथरुमबाट निकै कडा गन्ध आइरहेको थियो । यस क्रममा प्रहरीले अभिनेताको शव देख्दा शव कु हि एको अवस्थामा थियो ।
‘मिर्जापुर’ मा मुन्ना भैयाको भूमिका निभाएका अभिनेता दिव्येन्दु शर्माले ब्रह्मा मिश्रको निधन भएको जानकारी दिएका छन् । दिव्यन्तु शर्माले आफ्नो आधिकारिक इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा एक पोस्ट सेयर गरेका छन्, जसमा उनले सबैलाई यो दुखद खबर सुनाएका छन् । दिव्येन्दु शर्माले ब्रह्मा मिश्रसँगको तस्बिर सेयर गरेका छन्, । ब्रह्मा मिश्रा आफ्नो करियर बनाउन भोपालबाट मुम्बई आएका थिए । यहाँ आएर उनले धेरै ठूला कलाकारसंग फिल्ममा काम गरे । ब्रह्माले ‘केसरी’, ‘हसीन दिलरुबा’, ‘मांझी’, ‘बद्रीनाथ की दुल्हनिया’ फिल्ममा काम गरेका थिए । तर, उनले आफ्नो करियरमा धेरै पटक आर्थिक समस्याको सामना गर्नुपरेको छ । त्यसबेला अभिनेतालाई उनका परिवारका सदस्यहरूले समर्थन गरेका थिए।